प्रहरीले देशभर नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइरहेका बेला कैलालीमा विप्लवको पार्टीले प्रहरीविरुद्ध नै 'पक्राउ पुर्जी' जारी गरेको छ। 'जनअदालत' को नाम दिएर नेकपाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक असईलाई ‘पक्राउ पुर्जी’ जारी गरेको हो। कैलाली जनअदालत प्रमुख विकासको नामबाट शुक्रबार जारी पक्राउ पुर्जीमा राष्ट्रिय अनुसनधान विभागका असई भैरव कुँवरलाई ‘२५ दिनभित्र उपस्थित हुन’ भनिएको छ। कुँवरको घर आसपास सार्वजनिक स्थानहरू टाँसिएको उक्त पुर्जीमा लेखिएको छ– ‘कैलालीको… पुरा पढौ
सरकारद्धारा ८ जनाको नागरिकता खारेज, को को हुन् ?
सरकारले झुटो विवरण पेश गरी नागरिकता लिने आठ जनाको नागरिकता खारेज गरेको छ । विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय आइतबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सो जानकारी दिएका हुन् । बैठकले अशोक साह, विन्दे महतो, दानदेवी महतो, सोशील महतो, राजेन्द्र महतो, राजेश्वर महतो, रामकिशोर महतो र राजकुमार महतोको नागरिकता खारेज गरेको हो। पुरा पढौ
जब आकाशमै यात्रु बेहोस भए…
बुद्ध एयरको एटीआर विमान नेपालगन्जबाट काठमाडौँतिर उडिरहेको थियो । नारायणीदेखि उत्तरपश्चिमको पहाडमाथि आकाशमा पुग्दा विमान १५ हजार ५ सय फिट उचाइमा थियो । जहाजभित्र एयरहोस्टेस कृति झा र सुरक्षा अधिकारी यात्रुलाई पानी बाँड्दै थिए । जहाजको मध्यभागमा एक यात्रु एक्कासी बेहोस भएपछि खैलाबैला भयो । १३ नम्बरको सिटमा बसिरहेका ती यात्रु थिए, सुर्खेतका ६० वर्षीय तप्तबहादुर विष्ट जो पूर्वराज्यमन्त्री हुन् । छेउछाउका मान्छे चिच्याएपछि एयरहोस्टेस कृति त्यहाँ पुगिन् । मुखबाट… पुरा पढौ
पोखरा-आबुखैरेनी सडक विस्तारका लागि सरकारले एडिबीसँग २१ अर्ब ऋण लिने
सरकराले पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गतको पोखरादेखि आबुखैरेनीसम्मको ८० किलोमिटर सडक स्तरोन्नतीका लागि एशियाली विकास बैंक (एडिवी) सँग ऋण लिने भएको छ । साउन १६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले एडिबीबाट उक्त राजमार्ग सुधारका लागि करिब २१ अर्ब ४५ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता लिने सम्बन्धमा वार्ता टोली गठन गर्न अख्तियारी दिइने निर्णय गरेको हो । आइतबार मन्त्री परिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले उक्त… पुरा पढौ
प्रहरीको गोली लागेका भण्डारीलाई मासिक २५ हजार दिने निर्णय
सरकारले कञ्चनपुरमा प्रहरीको गोलीबाट घाइते भएका अर्जुन भण्डारीलाई मासिक २५ हजार रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ। कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको गत वर्ष साउनमा बलात्कारपछि हत्या भएकोमा दोषीलाई पक्राउ गरी कारबाहीको माग राख्दै भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर भण्डारी घाइते भएका थिए। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय आइतबार सुनाउँदै भण्डारीलाई राहत दिने निर्णय भएको जानकारी दिए।… पुरा पढौ
यस्ता घुस्याहा अधिकृत !
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिएको अभियोगमा एक जना अधिकृतलाई पक्राउ गरेको छ । अख्तियारले उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय हेटौँडाका अधिकृत चन्दनकुमार अमात्यलाई घुस रकमसहित पक्राउ गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोग, हेटौँडाले जनाएको छ । आयोगका अनुसार अधिकृत अमात्यलाई आइतबार साँझ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौँडाको टोलीले कार्यालयबाटै पक्राउ गरेको हो । उद्योग दर्ता गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिदिने भन्दै उनले सेवाग्राहीसँग घुस मागेको सूचनाका आधारमा हेटौँडास्थित… पुरा पढौ
उपनिर्वाचनका मतदाता : साउन १६ गतेसम्ममा १८ वर्ष पुग्नुपर्ने !
आगामी मङ्सिर १४ गतेका लागि तोकिएको उपनिर्वाचनमा यही साउन १६ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा भएका व्यक्ति मात्र योग्य मतदाता हुने छन् । निर्वाचन आयोगको सिफारिसअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहको रिक्त पदहरूमा मङ्सिर १४ गते उपनिर्वाचनको मिति तोकिएको छ । उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले उपनिर्वाचनको मिति तोकिएको दिन (यही साउन १६ गते) सम्ममा नाम दर्ता भई सोही मितिसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा भएका मतदातालाई उमेर अठार वर्ष… पुरा पढौ
कर्मचारीको नयाँ तलबमान, कसको कति ? (सूचीसहित)
सरकारले कर्मचारीको नयाँ तलबमान सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमार्फत १८ देखि २० प्रतिशत तलब बृद्धिको घोषणा गरिएको थियो । तर नयाँ तलबमान सार्वजनिक भएको थिएन । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारी र शिक्षकको नयाँ तलबमान निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार मुख्यसचिवको तलब ६९ हजार ४८२ रुपैयाँ भएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहतर्फ अधिकृत एकारौंको ५९ हजार २५ सम्म छ । पुरा पढौ
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बेलायत जाँदै
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बेलायत जाने भएका छन् । तमुधि युकेको आयोजनामा हुने नेपाली मेलामा प्रमुख अतिथिको रुपमा सहभागी हुन मुख्यमन्त्री गुरुङ बेलायत जान लागेका हुन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीको बेलायत भ्रमण स्वीकृतिका लागि संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । बेलायतमा नेपाली मेलामा आगामी भदौ आगामी भदौ ६ र ७ गते हुँदैछ । संघ सरकारले स्वीकृति दिएपछि मात्र मुख्यमन्त्री गुरुङको बेलायत भ्रमणको तालिका तय हुनेछ । पुरा पढौ
वडाध्यक्षहरूले आफ्नो हैसियत निर्धारण गर्न माग गरेका छन् । बाग्लुङस्थित ४ स्थानीय तहका करिब २ दर्जन वडाध्यक्षले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसंग पृथ्वीसुब्बा गुरुङसंग भेट गरी आफ्नो हैसियतबारे प्रश्न गरेका थिए । भेटमा उनीहरूले निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएर समेत सरकारले आफूहरूलाई मर्यादाक्रममा समावेश नगरेको भन्दै उनीहरूले हाम्रो हैसियत के हो ? भनी प्रश्न समेत गरेका थिए । गृह मन्त्रालयको मर्यादाक्रममा वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूको मर्यादाक्रम कहाँ कसरी हुने भनी केही पनि उल्लेख छैन… पुरा पढौ
Page 254 of 408« First«...102030...252253254255256...260270280...»Last »